विज्ञापनविरुद्ध लोक सेवा अगाडि प्रदर्शन, भोलिको परीक्षा के होला ? -
विज्ञापनविरुद्ध लोक सेवा अगाडि प्रदर्शन, भोलिको परीक्षा के होला ?
फाईल तस्बिरः स्थानीय तह विज्ञापनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै ।
काठमाडौं । स्थानीय तह विज्ञापन परीक्षाको अघिल्लो दिन लोक सेवा आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । आदीवासी जनजाती महासंघ लगायतका विभिन्न संघ सस्थाले आयोग कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै लोक सेवा आयोगको अनामनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय अगाडि बिहीबार बिहान प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आयोगले गत असारमा गरेको विज्ञापनको परीक्षा सुरु हुन १ दिनअगाडि त्यसको खारेजी माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ को नाममा गरिएको प्रदर्शनका कारण आयोग अगाडिको सडकमा केहीबेर तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
प्रदर्शनकारीले सडक छेकेर प्रदर्शन गरेपछि केहीबेर सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो । प्रदर्शनले तनावको अवस्था सिर्जना भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर प्रदर्शनकारीलाई हटाएको थियो । अहिले अवस्था सामान्य बनेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लोक सेवा आयोगले गत असारमा स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ३१ कर्मचारीको लागि विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजातीहरुले खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आयोगको उक्त विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको थियो । जुन मुद्दामा आयोगले सफाई पाईसकेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत खोलिएको विज्ञापनको भोलि शुक्रबार पहिलो चरणको परीक्षा हुँदैछ ।
लोक सेवा आयोग, विज्ञापन, स्थानीय तह विज्ञापन
Prevसावधान ! के तपाई ‘फेस एप’ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम बन्दNext